Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် တစ်ခါသုံးမိုးဖုံး ထုတ်လုပ်သူနှင့် တစ်ခါသုံးမိုးဖုံး ပေးသွင်းသူ၏လမ်းညွှန်ကိုရှာပါ။
တစ်ခါသုံးမိုးဖုံး Výrobce, dodavatel, vývozce s Factory v Taiwan - တစ်ခါသုံးမိုးဖုံး, တစ်ခါသုံးမိုးဖုံး výrobce, တစ်ခါသုံးမိုးဖုံး dodavatel, တစ်ခါသုံးမိုးဖုံး vývozci, တစ်ခါသုံးမိုးဖုံး vývozce, Taiwan တစ်ခါသုံးမိုးဖုံး, တစ်ခါသုံးမိုးဖုံး továrna, တစ်ခါသုံးမိုးဖုံး výrobci, တစ်ခါသုံးမိုးဖုံး Dodavatelé, တစ်ခါသုံးမိုးဖုံး výrobce, တစ်ခါသုံးမိုးဖုံး OEM, တစ်ခါသုံးမိုးဖုံး továrny, တစ်ခါသုံးမိုးဖုံး výrobci
တစ်ခါသုံးမိုးဖုံး výrobce, dodavatel, vývozce, továrna Taiwan
အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏စုံလင်သောအရွယ်အစားကိုရှာဖွေခွင့်ပြုထားကြောင်း drawstring နှင့်အတူ hood ကို,နှင့်မိုးရွာ ponchos ပေါ်မှာဒီဇိုင်းနှင့်လည်း elastic အင်္ကျီလက်နှင့်အတူ,သငျသညျခွောကျသှေ့သင်၏ခေါင်းကိုစောင့်ရှောက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုဝင်ရောက်ခြင်းကနေမိုးရွာရွာတားဆီးနိုင်ပါတယ်
ထိုသို့သောပျော်ပွဲစားဖျာအဖြစ်အသုံးပြုခံနေရအဖြစ် versality ကမ်းလှမ်း
အဆိုပါမိုး poncho အသုံးပြုသူများသည်ထိုကဲ့သို့သောဆိုင်ကယ်စီးနင်းအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောလှုပ်ရှားမှုများလုပ်ဆောင်သွားရန်အတွက်လုံလောက်သောအာကာသကမ်းလှမ်း,သို့မဟုတ်တောင်တက်.
တဦးတည်းရဲ့အရွယ်အစားအားလုံးကိုက်ညီ：ဒါဟာ'အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်လူငယ်များနှစ်ခုလုံးအတွက်သင့်လျော်သော s ကို,အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး,မိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများ
နိုင်ငံတကာအမိန့်:30 ရက်%အပျငှေ,ဝယ်လက် L ကိုထုတ်ပေးသင့်တယ်/အဖြစ်မကြာမီ B ကအဖြစ်ကို C/L ကိုထုတ်လုပ်သူကကမ်းလှမ်းနေသည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.rain-clothing.com/my/disposable-rain-cover.html
တစ်ခါသုံးမိုးဖုံး ၏အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ကိုဝယ်ပါ။ တစ်ခါသုံးမိုးဖုံး ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan တွင်ရှိသောစက်ရုံ